नेपाल एयरलाईन्समा जागिर खुल्यो, एसएलसी पढेकालाई पनि अवसर
काठमाडौं, १४ साउन । नेपाल वायु सेवा निगमले रिक्त पदमा कर्मचारीका लागि योग्यता पुगेका व्यक्तिका लागि दरखास्त आव्हान गरेको छ । एसएलसीदेखि स्नातक तहसम्म पास गरेका नेपाली नागरिकका लागि निगमले रोजगारीको अवसर खोलेको हो...
मुल्य घटेसंगै पाल्पाका सुन पसलमा ग्राहकको भीड
– सुशिल नेपाल पाल्पा, १४ साउन । तीज आउन अझ डेढ महिना बाँकी छ । विवाहको लगन शुरु हुन त अझै धेरै समय छ । तर, सुनचाँदी पसलहरुमा ग्राहकको भीडभाड देख्दा लाग्छ कि तीज...
अब बसको टिकट अनलाईनबाट, मितेरी यातायातले ल्यायो नयाँ सुविधा
काठमाडौं, १४ साउन । पूर्वी नेपालको यातायात क्षेत्रमा उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको मितेरी यातायातको टिकट अब अनलाइनबाटै काट्न सकिने भएको छ । मितेरी यातायातले अनलाइनबाट बस टिकट काट्न सकिने सेवा दिँदै आइरहेको बससेवा...
घरजग्गा राजस्व दोब्बर
काठमाडौं, १४ साउन । गत आर्थिक वर्षमा घरजग्गा कारोबार उच्च भएको छ । कारोबारसँगै रजिस्ट्रेसन दस्तुर लक्ष्यभन्दा दोब्बर संकलन भएको छ । यो वर्ष ५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रजिस्ट्रेसन दस्तुर संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा १०...
साढे तीन हजारलाई नेपाली सेनामा जागिरको अवसर, तलब न्युनतम २५ हजार
काठमाडौं, १३ साउन । बेरोजगार युवालाई खुसीको खबर । फौजमा काम गर्न चाहनेका लागि नेपाली सेनाले साढे तीन हजारका लागि जागिर खोलेको छ । स्वीकृत दरबन्दीभित्र रिक्त रहेका पदहरुमा समावेशी तथा खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट पदपूर्तीका...
कोरियाद्वारा सोह्र करोडका भारी उपकरण हस्तान्तरण
काठमाडौँ, १३ साउन । गणतन्त्र कोरियाले भूकम्पले भत्काएका भग्नावशेष हटाउन तथा निर्माणमा उपयोग हुने भारी रु १६ करोड बराबरका २४ वटा भारी उपकरण नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा...
‘देश विकासका लागि बजेटको कमी हुँदैन्’
– विवेक विश्वकर्मा भैरहवा, १२ साउन । अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले बजेटको अभावमा सचांलित योजनाहरुको काममा ढिलाई हुन नदिने बताएका छन् । राष्ट्रिय स्तरमा सचांलित योजनाहरुको लागी बजेट मार्फत निश्चित रकम बिनियोजन गरिए पनि उक्त रकम...
हामी गाउँघरमा पुगेर बिनाधितो ऋण दिन चाहन्छौँ
मेगा बैंकको बितेको पाँच बर्षलाई कसरी लिनुहुन्छ ? कुनै पनि प्रोजेक्ट सफल हुनका लागि त्यसको टिममा को–को छ भन्नेले अर्थ राख्छ । उनीहरुको सिनर्जी र एक्सपेक्टिज के हो भन्नेले भूमिका खेल्छ । ‘राइट पर्सन...
यसकारण सुन तोलाको २० हजारमा झर्न सक्छ !
एजेन्सी । सुनको भाउमा निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । ३० हजारबाट घटेर सुनको भाउ करिब २४ हजार भारतीय रुपैयाँ नजिक पुगेको छ । तर अझै पनि दाबी गरिएको छ कि यो भाउ २० हजार...
नेप्से आज अठार अङ्कले ओरालो लाग्यो
काठमाडौँ, १२ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै उकालो सेयर बजार आज पुनः ओरालो लागेको छ । लगानीकर्तामा आएको उत्साहका कारण सेयर बजारमा गत ७ गते...
तटबन्ध निर्माण गर्न भारतले दियो साढे ३८ करोड
काठमाडौँ, १२ साउन । भारत सरकारले नेपालका तीनवटा नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्न रु ३८ करोड ६२ लाख ६ हजार थप सहयोग उपलब्ध गराएको छ । उक्त रकम बाग्मती, लालबकैया र कमला नदीमा तटबन्ध निर्माणको...
बहुदेशीय कम्पनीले रोयल्टी तिरेनन्
चितवन, १२ साउन । चितवनको भरतपुरमा रहेका बहुदेशीय (मल्टिनेसनल) कम्पनीले जिल्ला विकास समितिको रोयल्टी कर तिर्न अटेर गरेका छन् । यहाँको बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड र माउन्ट एभरेस्ट ब्रुअरीले पटकपटक ताकेता गर्दासमेत रोयल्टी नतिरेको...
« 1 … 706 707 708 709 710 … 834 »